News - Sidee loo soo saaraa Magnet Sintered Neodymium?
Sintered NdFeB magnetwaa magnet daawaha laga sameeyay oo laga sameeyayNd, Fe, B iyo waxyaabo kale oo bir ah.Waxay ku jirtaa birlabta ugu xoogan, xoog qasab fiican. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa matoorrada yaryar, matoorrada dabaysha, mitirrada, dareemayaasha, ku hadla, nidaamka ganaaxa magnetic, mashiinka gudbinta magnetic iyo codsiyada kale ee warshadaha. Aad bay u fududahay in lagu daxleeyo deegaanno qoyan, markaa waa lagama maarmaan in la sameeyo daaweynta dusha sare iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha. Waxaan bixin karnaa daahan, sida Zinc, Nickel, Nickel-copper-nickel, Lacag, dahaadh dahab, Daboolida Epoxy, iwm Fasalka: N35-N52, N35M-48M, N33H-N44H, N30SH-N42SH, N28UH-N38UH, N28EH-N35EH
Hawsha Soo-saaridda Magnet-ka Neodymium Magnet-ka ah
Maaddooyinka ceyriinka birlabta iyo biraha kale waxay ku dhacaan soo noqnoqoshada dhexdhexaadka waxayna ku dhalaalaan foornada kuleylka kuleylka.
Ka dib marka la dhammeeyo tallaabooyinka geeddi-socodka ee kala duwan, maaddada 'ingots' waxaa lagu jajabiyaa jajabyo ah dhowr mitir oo cabirkoodu sarreeyo. Si looga hortago oksidheer inay dhacdo, qaybaha yaryar waxaa ilaaliya nitrogen.
Qaybaha magnetic-ka waxaa lagu dhejiyaa jiingad waxaana la adeegsadaa aag magnet ah halka magnets lagu riixayo qaababka ugu horreyn. Qaab dhismeedka ugu horreeya ka dib, saliidda cadaadiska isostatic waxay sii socon doontaa sameynta qaabab.
Qaybaha magnetic-ka waxaa la dhigayaa ingots-ka la cadaadiyey waxaana lagu daaweyn doonaa kuleylka foornada. Cufnaanta ingots-yada hore waxay kaliya ku dhufanaysaa 50% cufnaanta runta ah ee xoqidda. Laakiin ka dib marka la sinto, cufnaanta runta ahi waa 100%. Iyada oo loo marayo nidaamkan, cabbiraadda maaddooyinka loo yaqaan 'ingots' ayaa ku dhowaad yaraanaya 70% -80% oo muggiisuna uu hoos u dhacayo 50%.
Qalabka magnetka ee aasaasiga ah ayaa la dejiyay ka dib marka la dhammeeyo sinjiga iyo gabowga. Qiyaasaha ugu muhiimsan oo ay ku jiraan cufnaanta qulqulka haraaga, qasabka, iyo wax soo saarka tamarta ugu badan ayaa la duubay.
Kaliya magnets-yada ka gudbay kormeerka ayaa loo diraa habraacyada soo socda, sida farsameynta iyo isku ururinta.
Yaraanshaha geedi socodka sinjiga awgeed, cabbiraadaha loo baahan yahay waxaa lagu gaaraa iyadoo lagu jajabayo birlabyada leh abrasives. Maaddooyinka dheemanka ayaa loo adeegsadaa hawshan maxaa yeelay magnetku aad buu u adag yahay.
Si aad ugu haboonaato deegaanka lagu adeegsan doono, magnets-ka waxaa lagu soo rogay waxyaabo kala duwan daaweynta dusha sare. Mawjadaha 'Nd-Fe-B' guud ahaan waa u nugul yihiin miridhku muuqaalka loola dhaqmo sida magnet NiCuNi, Zn, Epoxy, Sn, Black Nickel.
Ka dib dahaadhka, cabbiraadaha la xiriira iyo kormeerka muuqaalka ayaa la sameyn doonaa si loo xaqiijiyo muuqaalka sheyga magnetka. Ka sokow, si loo hubiyo saxsanaanta sare, waxaan sidoo kale u baahanahay inaan tijaabino cabbirka si loo xakameeyo dulqaadka.
Marka muuqaalka iyo cabirka dulqaadka magnetku uqalmo, waxaa la joogaa waqtigii la sameyn lahaa jihada magnetka.
Ku xigta kormeerka iyo magnetize, magnets ayaa diyaar u ah inay ku ridaan sanduuqa waraaqaha, xitaa santuuqa alwaaxda sida ku xusan shuruudaha macaamiisha. Magnetic Flux waxaa go'doomin kara bir si hawo loo galiyo ama loo geeyo xilli cayiman.